Oven Dutch, Skillets, Grill Pan, Casserole - DINSEN
DINSEN Ilay namorona fiainana tsara kokoa
Dinsen Impex Corp dia mifantoka amin'ny fanatsarana sy fanavaozana mitohy ho an'ny fampandrosoana fandrahoana vy, ny teknika ary ny famokarana. Mandritra izany fotoana izany dia manome OEM, ODM, ary serivisy hafa koa izahay.
Ny orinasanay dia ankatoavin'ny ISO9001: 2015 & BSCI, ary miaraka amin'ny tsipika fanariana DISA-matic sy ny tsipika famokarana mialoha ny vanim-potoana, ny tsipika enamel ary ny fitaovana fitiliana feno. Noho ny famokarana maoderina, toeram-piarovana tontolo iainana tonga lafatra, fizotran'ny famokarana manara-penitra, teknisiana matihanina ary rafitra fanandramana feno, ny vokatra fandrahoana vy anay dia naondrana haingana mihoatra ny firenena 20 sy faritra, toa an'i Alemana, Britain, France ary Etazonia sns, ary nanangana fiaraha-miasa stratejika maharitra amin'ny mpanjifantsika izahay. Dinsen dia hitazona ny iraka hanatsarana ny kalitaon'ny fiainan'ny olombelona, ​​hiara-miasa amin'ireo mpanjifantsika sy mpiara-miasa amintsika any an-trano sy any ivelany, mba hampivelatra sy hivarotra fandrahoan-tsolika enamel mandroso tontolo iainana kokoa, matihanina kokoa.
DA-C25001 / 29001/33001/37001 vy avo Q ...
DA-DO21001 / 25001/29001 vy avo lenta ...
DA-DO32001 lakozia fivarotana mafana avo lenta 2020
DA-DO25002 / 27001 lakozia 2020 amidy mafana
Fitaovana fandrahoana vy DA-DO31001 varotra mafana 2020
DA-DO19001 / 20001/21002/24001/27002/27003 mpilalao ...
DA-DO23001 vy lafo amidy 2020 varotra mafana
DA-DO27002 vy-namana vy vy 2020 varotra mafana
Sakafo mahandro sakafo DA-S24001 avo lenta
DA-S28002 fanaka vy mahandro sakafo avo lenta
DA-S26001 vita amin'ny vy vy any Chine 2020 amidy mafana
DA-S30001 mandefa vy avo lenta ara-tontolo iainana
DA-S29001 fanaka vy nandrahoana 2020 fivarotana mafana
Ny varotra DA-S13002 vy efa niatrika ny taona 2020 varotra mafana
DA-S13003 / DA-S16002 / DA-S20003 vy vy ...
DA-S22002 / DA-S20005 vy-mpandray vy vy c ...
DA-BC37001 2020 fivarotana mafana fivarotana vita amin'ny c ...
DA-BC26001 / 32001/32002/37001/37002 vy ...
Lakozia DA-BC13001 vita amin'ny varotra mafana any Sina 2020
DA-GP38002 vy lafo amidy 2020 varotra mafana
Manolotra tombony lehibe ho an'ny mpanjifanay rehetra ihany koa izahay, na ny vaovao na ny fiverenana. Aza misalasala manamarina antony bebe kokoa nahatongavanay ho mpanjifanay ary manana traikefa mividy tsy manahirana.
Oram-be any Henan
Nandritra izay andro vitsy lasa izay, Zhengzhou, Xinxiang, Kaifeng ary toerana hafa ao amin'ny Faritanin'i Henan dia niharan'ny oram-be. Ity fizotrany ity dia nampiseho ny toetoetran'ny rotsakorana be dia be, ny faharetana lava, ny rotsakorana maharitra fohy, ary ny tendrena malaza. The Central Meteorological Observa ... / p>
Dinsen mankalaza ny faha-100 taonan'ny nananganana ny Antoko Kaominista China！
Zato taona, dia fitsangatsanganana sy fidinana. Manomboka amin'ny sambo mena kely mankany amin'ny sambo goavambe izay hitarika ny fitoniana sy ny dia lavitra ataon'i Shina, ankehitriny, ny Antoko Komonista China dia nanomboka ny fitsingerenan'ny faha-100 taonany. Avy amin'ny antoko Marxista voalohany misy mpikambana antoko 50 mahery, manana ... / p>
Adiresy: Làlana NO.70 RENMIN, HANDAN HEBEI CHINA
Telefaona: + 86-310-3013689